Extrait voa voaloham-boaloboka - J&S Botanics
[Anarana latina] Vitis vinifera Linn
[Loharano zavamaniry] Voam-boaloboka avy any Eropa
[Famaritana] 95% OPC , 45-90% polyphenols
[Fipoahana] vovoka mena
[Zava-maniry ampiasaina]: voa
[Metaly mavesatra] ≤10PPM
Fitahirizana [fitahirizana] fitahirizana any amin'ny faritra mangatsiaka sy maina.Manalavira ny hazavana mivantana sy ny hafanana.
[Famonosana] Voangona ao anaty amponga-taratasy sy kitapo plastika roa ao anatiny.
Ny vokarintsika dia nandalo ny valin'ny fanadinana nataon'i ChromaDex, Alkemist Lab. ary andrim-panadihadiana momba ny andian-dàlana hafa, toy ny fitadiavana;
2. Ny lalao miady amin'ny bibikely mpamono bibikely (EC) No 396/2005 USP34, EP8.0, FDA ary ny fenitra sy fitsipika mifehy ny pharmacopoeia vahiny;
3. Ny metaly mavesatra mifanaraka amin'ny fanaraha-maso fenon'ny pharmacopoeia vahiny, toy ny USP34, EP8.0, FDA, sns.;
4. Nanangana sampana iray ny orinasanay ary manafatra akora mivantana avy any Eropa miaraka amin'ny fifehezana hentitra metaly mavesatra sy famonoan-tena. Ny aslo miantoka ny votoatin'ny procyanidins amin'ny voan-boaloboka dia mihoatra ny 8,0%.
Voamariky ny voaloboka (Vitis vinifera) nohon'ny fanafody mahasoa sy mahavelona azy ireo nandritra ny an'arivony taona maro. Efa ela dia nihinana voaloboka ny Ejipsiana, ary ny filozofa grika taloha dia niresaka ny hery manasitrana voaloboka - matetika amin'ny endrika divay. Ireo mpanasitrana eropeana dia nanao menaka avy amin'ny sakam-boaloboka mba hitsaboana aretin-koditra sy maso. Ny ravina voaloto dia nampiasaina hampijanonana ny fandehanan-dra, ny fihanahana ary ny fanaintainana, toy ny karazany nentin'ny hemorrhoids. Ny voaloham-boalavo dia nampiasaina mba hitsaboana ny tsilo mafy, ary ny voaloboka maina (raisins) dia nampiasaina ho an'ny constipation sy ny hetaheta. Voaroy, voaloham-boaloboka, voaloham-boaloboka dia nampiasaina mba hitsaboana aretina maro isan-karazany, anisan'izany ny homamiadana, cholera, cacoka, mie, tsindrona maso, ary hoditra, voa ary aty.
Ny fambolena voa voaloham-boaloboka dia derivatives indostrialy avy amin'ny voan-boaloboka feno izay manana fifantohana lehibe amin'ny vitamina E, flavonoid, asidra linoleik ary OPC mahagaga. Ny fahafahana ara-barotra mahazatra amin'ny fitrandrahana voaloham-boaloboka dia natao ho an'ny zavatra simika fantatra amin'ny hoe polyphenols manana hetsika antioxidant amin'ny vitro.
Next: Sakam-boaloboka voaloto
Siberia Ginseng hanesorana
Green Coffee Bean hanesorana
Hodi-kazo White Willow hanesorana
Tribulus terrestris nalaina